Warshadaha difaaca dhulka
BMC si casriyayn loogu sameeyo 84 Leopard 2A4 Taangiyada; Taliska Ciidamada Dhulka ee Turkiga wuxuu sii wadaa howlaha casriyeynta ee taangiyada waaweyn ee dagaalka (AMT) agabkiisa. Wajahadan gudaheeda, 160-165 unug ayaa horay qandaraas ugu siiyay ASELSAN. [More ...]
Soo-saarkii ka dib, keenida waqtiga waxsoosaarka baaxaduna waa sii socdaa bisha May sidoo kale, ka dib marka la soo bandhigo mashruuca mashruuca Mashruuca Badbaadinta Badbaadiya ee Qeybta Badbaadinta Macdanta (MKKKK) oo ay soo saartay Kooxda Wax Soo Saarka ee MPG Makine. Soosaarka Mashiinka MPG [More ...]
ASELSAN, oo ah aasaaska warshadaha difaaca Turkiga, waxay durbadiiba diyaarineysaa u diyaargarowga mustaqbalka ciidanka iyadoo ay fulineyso mashruucyo lagu daboolayo baahiyaha hadda jira ee Ciidamada Qalabka Sida ee Turkiga. Xitaa jawaab-celin aad u dhakhso badan jawiga dagaal ee maanta, [More ...]
Difaaca Turk, oo ah mid ka mid ah hogaamiyaasha hormuudka u ah ururrada warshadaha difaaca ASELSAN ee Turkiga; waxay ku qaaddaa saanad caqli gal ah taangiyada iyo gawaarida gaashaaman. Rasaasta rasaasta oo leh 35 mm Qaybta ASELSAN waxay soo bandhigtay TÜBİTAK SAGE iyo MKE [More ...]
Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa ku dhawaaqday: in la baabi'iyay Ururka Argagixisada ah ee 'PKK' Çemçe Group
Bayaan ay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Gudaha, ee ku taal degmada Çemçe ee degmada Kars-Kağızman, Çemçe, iyo 29 argaggixiso ah, oo lagu diidan yahay hawlihii ay ka taageereen hawada Gendarmerie Commandos 30-2020kii Abril 7. [More ...]
Ejder Yalçın 4 × 4 Gawaarida Dagaal ee Gawaarida Nurol Makina waxay ubaahantahay howlaha howlgalada ee unugyada militariga iyo ciidamada amaanka ee dhamaan noocyada gobolada iyo xaaladaha dhulka, oo ay kujiraan meelaha dagan iyo miyiga. [More ...]
Wasiirka Gaashaandhigga Qaranka Hulusi Akar wuxuu baarey Qalabka Farshaxanka Qaranka oo ay soo saartay Shirkadda Warshadaha Warshadaha Warshadaha (MKEK) wuxuuna macluumaad ka helay Maamulaha R&D ee Warshadaha Amniinka, Çağatay Öncel. MIIK [More ...]
Heerka Dhexe ee Heerka Labaad ee Mashruuca Gawaarida Gawaarida Aan La Aaminsanayn ayaa la saxeexay inta u dhaxeysa Madaxtooyada Warshadaha Difaaca (SSB) iyo ASELSAN. Wasiirka Warshadaha Difaaca Madaxweynaha. Dr. Demsmail Demir: “Caawiyaasha Robotic-ku waxay u yimaadaan Mehmetçi! [More ...]
ASELSAN, KANGAL Drone-Mini / Micro UAV & RFEYP Nidaamka Isku-dhafka / Blinding (Jammer) Nidaamka looga baahan yahay Agaasimaha Guud ee Amniga iyo Taliska Ciidamada Cirka inta ay la egtahay heshiiska ay la saxeexatay Agaasinka Warshadaha Difaaca (SSB) sanadka 2018, [More ...]
Qandaraas la yidhaa "TAF Multi-Band Digital Joint Radio Supply" waxaa la saxeexay ASELSAN iyo Agaasimaha Wershadaha Difaaca (SSB) si loo daboolo baahiyaha xeeladaha iyo istiraatiijiyadeed ee Ciidamada Qalabka Sida ee Turkiga (TSK). [More ...]
Taageerada ASELSAN ee Meelaha Ku-meelgaarka ah ee Ku-meel-gaarka ah
Iyada oo la raacayo heshiiska ay kala saxeexdeen Agaasinka Warshadaha Difaaca Madaxtooyadda iyo ASELSAN, howlaha isku-dhafan ee loojistikada ayaa lagu fulin doonaa gobollada saldhigga ah illaa dhammaadka 2022-ka iyada oo loo eegayo Mashruuca Saldhigga Ku-meelgaarka ah ee Modular. Aagga Saldhigga Ku-meel-gaarka ah [More ...]
Bixinta Gawaarida Gawaarida Xamuulka ee Armored Gawaarida Ateş oo Dhameystiran
Laba hay'adood oo muhiim ah oo ka tirsan waaxda gaashaandhigga Turkiga ayaa ku biirey ciidammada gaashaanka ee ilaalada xadka ee guutada, Ateş Armored Mobile Border Surveillance, waxaa la bilaabay iyada oo lala kaashanayo Katmerciler iyo ASELSAN, oo ah shirkadda tignoolojiyada difaaca ee dalkeenna. [More ...]
Shirkadda technology ugu weyn ee Turkiga ee ku yaal mid ka mid ah meel HAVELSAN, sii wadaan in ay shaqada si ay u horumariyaan farsamada qaranka iyo kuwa maxalliga ah hanjabaadaha CBRN. Turkey ayaa ugu horeysay Chemical, Biological, shucaaca iyo Nukliyeerka (CBRN) Difaaca [More ...]
Xogta Difaaca ee Warshadaha Turkiga ee Sanadka 2019 Waa La Shaaciyay
Ururka Soo Saarayaasha Warshadaha Difaaca iyo Duulista (SaSaD) ayaa ku dhawaaqay xogta warshadaha Difaaca iyo Duulista Hawada ee sanadka 2019 Sida ku xusan warbixinta ay wadaageen SaSaD, qeybta waaxda warshadaha ee Duulista iyo Hawada 2019 [More ...]
5.56 Gaarsiinta Dhallaanka Biyo Gaarsiinta ah ee la Gaarsiiyay ayaa ka badan 65.000
Wasiirka Warshadaha Difaaca Madaxweynaha. Dr. Ismail Demir, 5,56 millimitir caliber waxaa soo saaray oo gaarsiiyay Hay'ada Warshadaha Warshadaha Warshadaha iyo Warshadaha (MKEK), Kalekalip iyo Sarsilmaz, boostada waxaa wadaagaya xisaabaadka warbaahinta bulshada ee rasmiga ah. [More ...]
Turkey Albania MPT-76 iyo MPT-55 deeqay
Republic of Turkey Wasaaradda Difaaca Qaranka ee Jamhuuriyadda Albania Wasaaradda Difaaca saxiixay maamuuska farsamo deeqda ah ee 30 cutub oo qoriga fudud. Xarunta Xarunta Shaqaalaha Guud ee Albania, oo leh heerarka NATO 30 [More ...]
Gawaarida cusub ee maxalliga ah iyo ta qaranku waxay ku yaalliin Adeegga Booliska Kıraç
Madaxweynaha warshadaha Difaaca Madaxtooyada Turkiga. Dr. İsmail Demir wuxuu cadeeyay in 6-dii ugu horeeysay ee “Kıraç” ee laga soo saaray Mashruuca Aaladda Dambi baarista Dembiyada Cusub la gaarsiiyey Xarunta Booliska. Madaxweynaheena Dr. [More ...]
ASELSAN, oo ah shirkadda ugu caansan ee warshadaha difaaca Turkiga, waxay sii wadeysaa dadaalkeeda ay ku ballaarineyso shabakadda raadiyaha ee qarsoon ee Agaasimaha Guud ee Amniga (EGM). Wasiirka Warshadaha Difaaca Madaxweynaha. Dr. Demsmail Demir, Agaasimaha Guud ee Amniga (EGM) [More ...]
Gawaarida cusub ee loo yaqaan 'PARS 3 Tak-Sök Thermal hubka hubka' oo ay diyaarisay 675E EOS oo leh tas-hiilaad maxalli iyo qaran ayaa loo gudbiyay Taliska Guud ee Gendarmerie (JnGK). TR Madaxtooyadda Warshadaha Difaaca (SSB) mawduuca [More ...]